Suuqgeynta Emailka otomaatiga ah iyo waxtarkeeda | Martech Zone
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay inaan hayno barnaamij faleebo ah oo ku saabsan suuq-geynta soo-dhoweynta oo aad iska qori karto bartayada (raadi is-dul-qaadka cagaaran ee foomka ah). Natiijooyinka ka soo baxay ololahaas suuqgeynta iimaylka otomaatigga ah waa wax la yaab leh - in ka badan 3,000 oo macmiil ayaa iska diiwaangeliyay aad iyo aad u yar oo ka mid ah macaamiisha. Weligeenna xitaa uma beddelin emayllada emayl qurux badan HTML wali (waxay ku qoran tahay liiska waxyaabaha la qabanayo). E-mayllada otomaatiga ah ayaa dhab ahaantii ah jihada aan dooneyno inaan kusii socono. Weligey ka tagi meyno maalinteena iyo usbuuclaha warsidaha suuq geynta, laakiin helitaanka xulashooyin shaqsiyadeed oo dheeraad ah oo loogu talagalay akhristayaashayada si ay ugu quustaan ​​mowduuc gaar ah waa jihada weyn ee aan dooneyno inaan sii baarno.
Suuqgeynta iimaylku waa sayidka horumarka. Halka kale taariikhda ka baxday hababka suuq-geynta ayaa looga tegayaa, isbeddelada emaylka, hagaajinta, iyo awoodaha la marayo. Sannadkii hore, ka jawaab celinta emaylku waxay ahayd heshiis aad u weyn. Isticmaalayaashu waxay marin ka helayeen internetka meel fog, iyo inay sii ahaadaan suuq geynta emaylka waxay noqotay inay ka jawaabaan dhammaan aaladaha iyo aaladaha kale. E-maylku hadda ma aha inay noqdaan kuwo jawaaba oo keliya, waa in la bartilmaameedsadaa, waqtigooda la gaaraa, oo la gaar yeelaa. Adi Toal, Qalab
Ganacsiyada u adeegsada otomaatiga suuq geynta si ay u kobciyaan rajada waxay la kulmaan koror gaaraya 451% oo ah hogaamin u qalma. Taasi waa tiro aad u tiro badan - Instiller-na wuu isku keenay bani aadminimo Taasi waxay bixisaa caddaynta in emaylka otomaatigu uu si weyn u saameynayo B2C iyo B2B wax ku oolnimada suuq-geynta.
Dabcan, emaylka otomaatiga ah si fudud ugama aha ololaha faleebada la doorto sida aan haysanno. Waxa kale oo ku jira emayllada kiciyay otomaatiga iyo sidoo kale olalaha otomaatiga ah ee otomaatigga ah ee kiciya markay kiciyeyaashu qaadaan tallaabo gaar ah. Farriimaha emayllada kiciya ayaa celcelis ahaan 70.5% ka sarreeya sicirka furan iyo 152% sicirka gujiska ka sarreeya ganacsiga sidii caadiga ahayd fariimaha suuq geynta. Sababta Waqtiga iyo shakhsiyeynta ayaa ka dhigaya emaylladani farriimaha ugu habboon ee aad abid si toos ah u bilaabi karto.
Ku saabsan Instiller
Instiller waxay dhistay xalka otomaatiga emaylka kaas oo bixiya dhammaan qalabka loo baahan yahay hay'adaha si ay macaamiisha ugu gaarsiiyaan adeegga suuqgeynta iimaylka oo dhameystiran. Hawlaha otomatiga ee firfircoon, isweydaarsiga, barnaamijyada soo dhaweynta, emaylka dhalashada, xaqiijinta ballansashada, taxadarka kobcinta iyo waxyaabaha firfircoon ayaa dhammaantood ah astaamaha barnaamijkooda - iyagoo ka dhigaya waxtarka emaylka otomatiga ah macluumaadkooda!
Tags: adi toalemaylka wakaaladdashaqaynta otomaatigamacmiilayaashaemaylka dhalashadaxaqiijinta ballansashadaololeyaal faleeboaalada otomaatiga firfircoonnuxurka firfircoonotomatiga emaylkaemaylka shaqada otomatigaemaylka u dir hay'adahashaqsiyeynta emaylkawaqtiga emailkarakibiyesuuq-geynta suuqakobci ololeyaashakobciso taxanahaemayl kiciyaysoo dhawoow emaylka
Ku Dhisida Meheraddaada Dhegeysi Online